Taona 2015 : nanjaka ny resaka kidnapping teto Antananarivo sy Toamasina | NewsMada
Taon’ny vonoan’olona sy ny fakana an-keriny iny taona 2015 lasa teo io. Tena lasibatry ny kidnapping ireo teratany karana ary farany teo ireo zanaka mpandraharaha iray any Toamasina. Olona telo fanta-daza kosa, niharan’ny vonoan’olona feno habibiana..
Raha efa lefilefy ny “Raharaha kidnapping” tao anatin’ny taona vitsivitsy izay, ny taona 2015 teo kosa no tena nanjakan’izany teto amintsika, indrindra ny teto Antananarivo sy Toamasina. Efa mihoatra lavitra ny nitranga tamin’ny taona 2006 nampalaza an-dry Lamà sy Mahandry ary ry Tsong ny zava-niseho tamin’iny taona lasa iny, raha ny resaka fakana an-keriny. Anisan’ny goavana teto an-dRenivohitra ny fakana an-keriny ny tompon’ny Conforama, Rafick Jaffaraly, ny volana aogositra lasa teo. Karana telo izy ireo indray nisy naka an-keriny tamin’io volana io. Tena nalaza kosa i Rafick Jaffaraly ary nahazoan’ireo olon-dratsy volabe amina miliara vao votsotra. Anisan’ny nanamarika ny taona koa ny fakana an-keriny teratany frantsay tany Toliara ny volana febroary ny taon-dasa iny ihany. Niditra an-tsehatra hatramin’ny polisy frantsay tamin’izany. Ny fakana an-keriny karana antsoina hoe Raoul tany Sambava, ny volana novambra teo, ka teto Antananarivo no natao ny fakana ny vola amina miliara.
Ny tany Toamasina kosa no tena niseholany ny fakana an-keriny izay misy ifandraisany amin’ny eto Antananarivo ihany. Anisan’izany ny fakana an-keriny an’i Moustapha Azir, izay efa am-bolana maro tany am-peletanan’ny jiolahy. Navotsotr’ireto farany, ny voalohan’ny volana desambara teo, ary notifiriny avy eo.
Ny farany izay mbola tsy nahitam-bokany hatramin’izao ny fakana an-keriny an’i Annie, efa novonoin’ireo jiolahy, sy Arnaud, tsy re maty tsy fantatra velona. Efa raharaham-pirenena mihitsy ny niafaran’ny resaka kidnapping ankehitriny. Misy olona ambony tafiditra, tambajotra lehibe ahitana mpitandro filaminana sns. Voatonontonona tamin’izany ny gadra mamita sazy eny Tsiafahy, izay voalaza fa anisan’ny nanao kidnapping tany Toamasina. Voalaza tamin’izany i Freddy, nambaran’ny eo anivon’ny fonja fa ao Tsiafahy. Mifamahofaho eo ny raharaha. Asa, mety hisy vokany ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana sasany amin’ity taona vaovao ity momba izany. Ny andraikitry ny fitsarana amin’ny fanaraha-maso ny voafonja amin’ny asan-jiolahy mahery vaika.
Lasibatry ny vonoan’olona feno habibiana ireo olo-malaza…
Nahazo vahana ny vonoan’olona feno habibiana nandritra iny taona 2015 teto an-dRenivohitra. Isany nahontsa ny maro tamin’izany ny namonoan’ireo olon-dratsy an’i Mbinina, mpamorona lamaody, ny volana febroary 2015, ka narian’ireo nahavanon-doza teny amin’ny fasam-bahiny eny Anjanahary ny fatiny niaraka tamin’ny fiarany. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka izy raha ny porofo tamin’ny fotoana nahitana ny razana. Ny polisy misahana ny heloka bevava no nisahana ny famotorona ity raharaha vonoan’olona ity. Lasa ny iray volana, saingy tsy nisy mangirana ny fanadihadian’ny polisy ka voatery nanao fihetsiketsehana tamin’ny alalan’ny diabe miaraka sy nanao akanjo fotsy ambony sy mainty ambany niainga avy eny Anjanahary ireo havan’i Nambinina.
Nisongadina koa ny nahafaty tampoka an’i Ketaka Razafimisa 29 taona, ilay mpanao horonantsarimihetsika malaza. Ny faramparan’ny volana avrily 2015 no hita faty tao an-tranony eny Betongolo izy. Voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny famonoana ny sakaizany ka nosamborin’ny polisy misahana ny heloka bevava. Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay voarohirohy noho ny porofo rehetra tsy azo lavina nandritra ny fizahana nataon’ny mpitsabo.
Nahaliana ny mpanara-baovao akaiky koa ny namoan’ny jiolahy ilay mpanefoefo teo amin’ny lafiny fandraharaha ara-toekarena, Rakotovao Andry, ny volana janoary 2015. Tompon’antoka tamin’ny famonoana ity mpandraharaha ity tao amin’ny hotely lehibe iray ao Moramanga ny mpamiliny. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ihany koa izy satria nahitana tsatok’antsy maromaro teo amin’ny tendany.
Yves S. sy J.C